Cuál es la diferencia entre trueno, relámpago y rayo | Meteorología en Red
Kedu ihe dị iche n’etiti egbe eluigwe, àmụ̀mà na àmụ̀mà
na oké ifufe Ha bu ihe omimi meteorological, obughi nani n'ihi ihe ha nwere ike inye aka na mbara igwe n'abali, kamakwa n'ihi ike di egwu nke okike nwere, nke o na egosi égbè eluigwe, àmụmà na àmụmà.
Ha nwere ike ịdị oke egwu, yabụ na-akwadoro gị ka ịdebe ha site na nchekwa, mana Nwere ike ịma ihe dị iche n’etiti àmụ̀mà na àmụ̀mà. Gịnịkwa bụ égbè eluigwe? Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịdị otu, ha bụ usoro dị iche iche dịtụ iche. Yabụ, iji nyere gị aka ịmata otu na nke ọzọ, anyị ga-akọwa otu ha si dị iche.
Lightning bụ ihe ike eletrik dị ike. O nwere ogologo nke ihe dịkarịa ala ma ọ bụ obere mita 1500, ọ bụ ezie na ha nwere ike iru karịa. N’ezie, e dekọtara otu na Texas n’Oktoba 31, 2001 nke na-atụtaghị otu ma ọ bụ ihe na-erughị 190km. Ọsọ ha nwere ike iru ala dịkwa egwu: na 200.000 km / h.
A na-emepụta ha n'igwe ojii na-emepe emepe nke a na-akpọ cumulonimbus, nke, ozugbo ha ruru etiti oge n'etiti troposphere na stratosphere (akpọ troppopause), ụgwọ dị mma nke igwe ojii a kpọtụrụ aha adọta ndị na-adịghị mma, si otú a na-enye ụzarị ọkụ. Nke a bụ nkọwa sayensị maka otu esi agba àmụmà.
Lightning bụ ọkụ anyị nwere ike mgbe oké ifufe eletrik na-ada. N'adịghị ka àmụmà, àmụmà anaghị emetụ n’ala.
N'ikpeazụ, anyị nwere égbè eluigwe, nke bụ naanị ihe ọ bụla ụda a nụrụ n'oge oké ifufe eletrik mgbe àmụmà na-ekpo ikuku nke ọ na-agafere karịa 28.000ºC. Ikuku a na-agbasawanye na oke ọsọ, yabụ ọ naghị ewe oge iji gwakọta na ikuku oyi na gburugburu ebe obibi, na-ebute oke ọdịda nke okpomọkụ, na-eme nkwekọrịta.
Anyị nwere olile anya na anyị ekpebiela obi abụọ gị ma na ị nwere ikeiche ugbu a n'etiti ọkụ, àmụ̀mà na égbè eluigwe. Chetakwa, oké ifufe bụ ihe ngosi eke dị egwu, mana ị ga-ekpori ndụ na ha mgbe niile .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe dị iche n’etiti egbe eluigwe, àmụ̀mà na àmụ̀mà
Ogo Celsius bụ ọ̀tụ̀tụ ọsọ nke ọsọ? Kemgbe ole mgbe?
Zaghachi Lus Reberger
Ogo Celsius bụ ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ.
Zaghachi Monica Sanchez
Ha choputara Zealand, ohuru ohuru nke di na Pacific Ocean
Nnyocha na-egosi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na ahịhịa na anụmanụ na Europe